Izay vola sy ny tombontsoa azo avy amin'ny ny tsy an'asa, ny vehivavy bevohoka ao Rosia - Vehivavy Ny Fironana
Angamba, ny vehivavy bevohoka dia liana amin’ny soa izay miantehitra amin’ny azy avy ny fanjakana. Ary raha ho avy ny reniny dia tsy maintsy ofisialy ny asa, izany hoe ny mpikarakara tokantrano, na tsy mbola vita ny fianarany (heverina ho mpianatra iray), dia afaka toy izany ny bevohoka tsy an’asa fanantenana ho an’ny fanampiana ara-tsosialy. Azonao atao ny hizara antontan-taratasy ho an’ireo handray tombontsoa amin’ny Birao akaiky indrindra ny Fiarovana ara-Tsosialy ny Mponina (interview). Na izany aza, ny fandoavam-bola izay namatsy ara-bola avy amin’ny Fiantohana ara-Tsosialy Tahirim-bola (soa ho an’ny fitondrana vohoka sy ny fiterahana ary ny vehivavy izay efa voasoratra ao amin’ny antenatal toeram-pitsaboana any amin’ny tany am-boalohany dingana (talohan’ny ny roa ambin’ny folo herinandro) ny fitondrana vohoka) tsy an’asa bevohoka ny vehivavy dia tsy miantehitra, fa bevohoka mpianatra mianatra amin’ny fifanarahana fototry ny fotoana feno sampan-draharaha, dia afaka mandray. Ho an’ny vehivavy bevohoka ny vehivavy mpianatra mba handray ny fiterahana vola fanampiana, dia mila mitondra ny taratasy fanamarinana ara-pahasalamana araka ny endrika tao an-toerana ny fanabeazana. Taorian’ny fametrahana ny antontan-kevitra ao anatin’ny folo andro fiasana, dia tsy maintsy handoa anie ny iray vatsim-pianarana sy ny fotoana iray-soa ny momba ny fisoratana anarana any ny vehivavy ny fakan-kevitra amin’ny tany am-boalohany daty (raha misy). Ho fanampiana ho an’ny fiterahana sy ny isam-bolana ny vola fanampiana ho azy, mpianatra ho tonga eo an-toerana amin’ny fiarovana ara-tsosialy sy hitondra ny antontan-taratasy. Reny-mpianatra izay tsy mampiasa ny fiterahana, ny isam-bolana ny vola fanampiana dia aloa avy ny fotoana ‘ny nahaterahan’ ny zaza.
Sasha:»misy ifandraisany amin’ ny fanafoanana ny orinasa, dia nisy nitifitra tamin’ny febroary, Tamin’ny fiandohan’ny May, hitako fa bevohoka aho. Moa ve aho manana fiterahana vola fanampiana.»Tsy isalasalana fa, rehetra voalaza ireo tombontsoa (ny fotoana iray-boky ho an’ny BIS, vola fanampiana ho an’ny vehivavy izay voasoratra ara-panjakana ao amin’ny dingana voalohany ny fitondrana vohoka, ny fiterahana vola fanampiana, isam-bolana ny vola fanampiana eo amin’ny zaza latsaky ny.
dimy taona) toy izany ny vehivavy bevohoka dia tsy ofisialy ny asa miantehitra
Amin’ny toe-javatra hafa, rehefa ny vehivavy no tsy tamin’ny fomba ofisialy ny asa alohan’ny ny fitondrana vohoka, na nametra-pialana mialoha ny fandikan-dalàna, dia ny tombontsoan’ny BiR dia tsy navela. Raha toa ny vehivavy iray dia voarakitra ao amin’ny asa fanompoana, dia izy no mandray ny tsy fananana asa amin’ny vola ihany alohan’ny hanombohan’ny ny B R fialan-tsasatra. Rehefa manome ny marary handao ny Asa Foibe, ny tsy an’asa, ny vehivavy bevohoka dia tsy afa-miala amin’ny ny fitsidihany. Rehefa tapitra ny fialan-tsasatra, ny fandoavam-bola ara-tsosialy ny fanampiana ho an’ny tsy an’asa dia indray, voalaza fa ny vehivavy dia vonona ny handeha hiasa.
Raha tsy izany, ny fandoavam-bola dia nahemotra ka mandra ny zaza
Nahoana no tsy Rosia ho olana be ny momba ny andraikitra amin'ny fanafahana Nazi Holocaust fahafatesana toby